Renovation Archives - Phoenix Emperor
Home / Archive by Category "Renovation"
All, Design, Renovation
Redirect to Portfolio
All, Renovation, Steel Structure
04May 2017 by zwethet
စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးသော၊ Phoenix Emperor မှ ကိုစိုးမင်း နှင့် ကိုအောင်ကို တို့ အဖွဲအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း နှင့် လုပ်ငန်းများ ဆထက်တပိုး တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေကြောင်း၊ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်တိုင်းကျပါတယ်။ တကယ်ကို အလုပ်အပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အိမ်ရှင်ပါ။ Ko Phyo Wai Tun httpss://www.facebook.com/foreverphyo.sg
25Apr 2017 by zwethet
Phoenix Emperorက ကိုစိုးမင်းက စိတ်ရှည်ပြီး လက်ရာသေသပ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ စိတ်ချမ်းသာမှာပါ။ ကိုယ်တွေ့ပါ။ Min Thein Soe httpss://www.facebook.com/min.theinsoe.73
To whom it may concern, I can’t thank you enough for the amazing work you and your workers have done on my home. What an incredible transformation my small 10 feet square kitchen, bathroom attached with toilet has undergone and you have converted an aged home kitchen intoamodern place to be proud of. The perfectionism shown in all the renovations is to be admired. Kitchen Renovation Thanks to Phoenix Emperor (Ko Soe Min), his staff and trades people! It is indeedasight to behold. My kitchen was completely gutted by Phoenix’ very capable and efficient staff member, as well as replumbed with experienced plumber. Subsequently, everything was replaced from the kitchen, bathroom fixtures and accessories to the ceiling and floor tiles. Ko Soe Min did not install…
Customer စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Home Decor Group ပါရှင် ဆက်လက်ပြီးလည်း ဒီ့ထက်မကအောင်မြင်ပါစေ… နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါရှင့်။ Kate Leon
ကျမ Phoenix Emperor ကို Facebook ပေါ်ကနေပဲ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ လက်ရာလေးတွေတွေ့ပြီး Viber ကနေတဆင့် ဆက်သွယ်ခဲ့တာပါ။ လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေပြောပြပီးအလုပ်အပ်ခဲ့ရပေမဲ့ နှုတ်ကတိထဲမှာပြောထားတဲ့ အတိုင်းဘယ်ဟာမှမချန်ထားပဲ လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ House Renovation Customer ကိုလဲအရမ်းအလေးထားတယ်။ ကျမလိုချင်တဲ့ Design နဲ့ ကျမအမျိုးသားလိုချင်တဲ့ Design မတူဘဲ မူးနောက်နေအောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့ စိတ်ရှည်ပြီး Customer ၂ ယောက်လုံးကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိုးမင်း။ ကျမအိမ်ကိုအလည်လာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလဲ Phoenix Emperor လက်ရာကိုသဘောကျနေကြတယ်။ Customer ကိုအလေးထားတဲ့ Phoenix Emperor ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ။ Khin Aye Thant httpss://www.facebook.com/khinaye.thant